Ny ekipa mpivarotra an'i Zhengchida dia nanatrika ny fampirantiana Hortiflorexpo IPM Beijing faha-22 nandritra ny 16-18 septambra 2020. Zava-niseho nahafinaritra ny lanonana fanokafana. Noho ny convid-19, ity no fampirantiana voalohany sy tokana izay ...
Tsy ela akory izay dia nanana mpikambana vaovao tao amin'ny atrikasa i Zhengchida, izay nitondra fahombiazana avo lenta sy kalitao tsara kokoa ho an'ireo vokatra. Izy ireo no fitaovam-piadiana mekanika mandeha ho azy. Ny tetikasa fampandrosoana ny milina mandeha ho azy dia natomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2019. Nisy ekipa injeniera efa za-draharaha natsangana ho ...
Karazam-bozaka fanapahana bozaka: karazam-boaloboka roa no ampiasaina matetika. Matetika, ny mpitrandraka dia mampiasa volo fanapahana. Izy io dia manapaka ahitra ary mamoaka azy amin'ny alàlan'ny tsimok'aretina. Ampiasaina ihany koa ny lelam-boninkazo. Natao hanapaka ny ahitra imbetsaka io ary ahodina ny ahitra ...